आजभोलि कपाल स्ट्रेट गर्ने फेसन चलेको छ । धेरैजसोले महँगो शुल्क तिरेर ब्युटिपार्लर, सैलुन पुगेर कपाल स्टे«ट पारेको देखिन्छ । तर, घरमै पनि कपाललाई सुहाउँदो स्ट्रेट पार्न सकिन्छ । तर, यसबारे केही ज्ञान भने लिनैपर्छ । कपाल स्ट्रेट बनाउने धेरै ब्रान्डका क्रिम बजारमा उपलब्ध छन् । यस्ता क्रिममध्ये कुनैमा पावर बढी र कुनैमा कम हुन्छ । पावर बढी भएका क्रिमले कपाल चाँडो स्ट्रेट बनाउँछ भने कम हुनेले ढिलो स्ट्रेट बनाउँछ । तर, कपालको प्रकृतिले पनि त्यसमा असर पार्छ । कसैको कपाल भर्जिन हुन्छ भने कसैको ड्यामेज, ...
सुन्दर रहन यस्ता कुरामा ध्यान दिनुस्
हामीले गर्ने दैनिक क्रियाकलापले हाम्रो जीवनशैली परिवर्तन हुने गर्छ । हाम्रो शरीर स्वस्थ राख्न राम्रो जीवनशैली अपनाउनु आवश्यक छ । हाम्रो शरीरमा लाग्ने विभिन्न प्रकारका रोग पनि हाम्रै अव्यवस्थित जीवनशैलीका कारण लाग्ने गर्दछ । अनुहार स्वस्थ राख्न पनि हाम्रो जीवनशैली व्यवस्थित हुनुपर्छ । सुन्दर अनुहार बनाउन बिहानदेखि बेलुकासम्म विभिन्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । बिहान उठेर दुई गिलास पानी पिउनुपर्छ । पानी खाएसँगै फलफूल खाँदा हाम्रो छालाका लागि अत्यन्तै फलदायी हुन्छ । बिहान एक गिलास जुस खानुपर्छ । बिहानै नुहाउनुपर्छ । नुहाएपछि मस्चराइजिङ क्रिम, लोसनहरू लगाउने गर्नुपर्छ ...
मानव शरीरमा लाग्ने रोगजस्तै हामीले प्रयोग गर्ने मोबाइल, कम्प्युटरजस्ता सामानमा पनि विभिन्न रोग लाग्ने गर्दछ । हामी त्यसलाई भाइरस भनेर चिन्ने गर्दछौँ । त्यसैले भाइरस संक्रमणपछि त्यसको उपचार गर्नुभन्दा सकेसम्म कम्प्युटरमा भाइरस लाग्न नदिनेतर्फ सोच्नुपर्छ । कम्प्युटरमा भाइरस लाग्यो भने काममा बाधा उत्पन्न हुनुका साथै कम्प्युटरमा राखिएका फाइल पनि हराएर हैरान हुन्छ । हामीले केही सावधानी अपनाएर कम्प्युटरलाई भाइरस लाग्नबाट बचाउन सकिन्छ । कम्प्युटरमा भाइरस लाग्यो भने कम्प्युटर स्लो हुने, फाइलहरू हराउने, कम्प्युटर आफैँ बन्द हुने, अनावश्यक फाइलले मेमोरी फुल हुने, फाइलहरू नखुल्ने, कम्प्युटरमा अनावश्यक सर्टकट ...
स्वाइन फ्लु एक प्रकारको खतरनाक भाइरस हो, जुन सुँगुरको कारण फैलने गर्दछ । यसलाई सुँगुरको ज्वरो पनि भन्ने गरिन्छ । यो रोग फैलाउन टाइप ए इन्फ्लुएन्जा (एच वान एन वान) जिम्मेवार हुन्छ । लक्षण ज्वरो आउने रुखाघोकी लाग्ने पखाला लाग्ने घाँटी पोल्ने वाकवाकी लाग्ने उल्टी हुने अत्यधिक थकाइ लाग्ने कसरी रोकथाम गर्ने ? तनाव नलिने प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने पौष्टिक पदार्थयुक्त खाना खाने निद्रा पूरा गर्ने शारीरिक रूपमा सक्रिय रहने लक्षण देखिए सार्वजनिक स्थानमा नजाने अंकमाल, चुम्बन नगर्ने, हात नमिलाउने नियमित रूपमा हात धोइरहने खोक्दा वा हाच्छ्युँ गर्दा आफ्नो नाक र मुखलाई टिस्यु पेपरले छोप्ने मास्क प्रयोग गर्ने खोकी लागेका व्यक्तिबाट टाढै रहने लक्षण देखिएको ...
कर्णाली अन्चलमा भयावहरुपमा देखिएको कुपोषणको उपचारमा स्थानीयबासी जान नमानेका कारण कुपोषणको अवस्था चर्कोरुपमा बढ्न थालेको छ । तत्कालिन चिल्खाया गाविस हाल तिलागुफा नगरपालिका–११ का गोगन विक छोराको उपचार गर्न जिल्ला अस्पताल कालीकोटमा जान नमान्दा स्वास्थ्यकर्मीलाई हम्मेहम्मे भएको छ । उनले आफ्नो छोरालाई देउताको खड्को लागेको र उपचार गर्नु नपर्ने भनेपछि स्वास्थ्यकर्मीलाई आपत आइलागेको बताइएको छ । गएको वर्ष जिल्लाको (साविकको सिपखाना गाविस), हाल रास्कोट नगरपालिका–१ निवासी सुशीला योगीको उच्च कुपोषणका कारण उपचार गर्दागर्दै मृत्यु भएको एक वर्ष नबित्दै सिपखाना–२ अर्थात रास्कोट नगरपालिका—१ निवासी तीनमहिने बालिका सम्झना रावतलाई ...
धेरैको निम्ती टाउको दुखाईको बिषय हो, पुट्ट पेट । यस्तो पेटले शरीर भद्दा र असुहाउँदिलो देखिन्छ । लुगा लगाउँदा पनि पेट लुकाउनै सास्ती हुन्छ । असुहाउदिलो पेट कसरी घटाउने त ? कोहि जिम धाइरहेका छन्, कोहि दौडिरहेका छन् । यद्यपी खानपान र शारीरिक क्रियाबीच सन्तुलन नमिल्दा पेट बढेको बढ्यै छ । जथाभावी खानेकुरा खाने र त्यस अनुरुप शारीरिक क्रिया नगर्दा पेटमा अतिरिक्त बोसो जम्न पुग्छ । यसले शरीरलाई असुहाउँदिलो देखिने मात्र होइन, रोग समेत नित्याउँछ । कसरी घटाउने ? पेट बढ्नुमा निस्क्रिय दिनचर्या जिम्मेवार छ । अक्सर बसेर काम गर्ने, ...
गाईको दुध अमृतसमान मानिन्छ । दुध स्रोत भएकाले पनि गाईलाई गुणी जनवार मानिन्छ । तर, गाईको दुध नवजात शिशुको लागि भने हानिकारक हुन्छ । अझ एक बर्षभन्दा कम उमेरका बच्चालाई त गाईको दुध पिउन दिनै हुन्न । यद्यपी कतिपय आमाले आफ्नो दुधको विकल्प ठान्छन्, गाईको दुध । आमाको दुध नआएको अवस्थामा पनि गाईको दुध पिउन दिइन्छ । ठोस पदार्थ खाने उमेर नपुगेको बच्चालाई गाईको दुध सजिलो र छरितो आहार मान्ने गरिन्छ । तर, गाइको दुधले नवजात शिशुको श्वासप्रश्वास प्रक्रियामा रोग ल्याउँछ । साथै पाचन यन्त्रमा समेत रोगको ...
शारीरिक र भावनात्मक रुपले आफ्नो राम्रो ख्याल राख्ने आदर्श समय हो, गर्भावस्था । यतिबेला स-साना कुरामा सर्तक रहनुपर्छ, खानपानदेखि जीवनशैलीसम्म । सकारात्मक सोंच राख्नुपर्छ । यसले गर्भको बच्चामा राम्रो प्रभाव पार्छ । नतिजा, बच्चा र आमा दुबैको स्वास्थ्यमा खोट आउने भय हुँदैन । १. प्रसवपूर्वको हेरचाह जब आफुलाई गर्भवती भएको थाहा हुन्छ, चिकित्सकलाई भेट्नुपर्छ । प्रसवअघि राम्रो हेरचाह आवश्यक हुन्छ, आफ्नो र बच्चाको स्वास्थ्यका लागि । यसरी हेरचाहको योजना किन बनाउने त ? – सुरुमै यसबारे तयारी गरियो भने अप्रत्यासित झन्झट एवं अप्ठ्यारा झेल्नुपर्दैन । – आफुले के कस्ता ...
झापाको बिर्तामोडमा तीन वर्षअघिदेखि सञ्चालनमा आएको बिएण्डसी हस्पिटलले सेवा विस्तार गर्दै सोमबारदेखि ५० शय्याकोे सघन उपचार कक्ष (आइसियु) सेवा शुरु गरेको छ । विसं २०७१ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गरेको यो अस्पताल निजीस्तरमा पूर्वान्चलकै ठूलो अस्पताल हो । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेको यो अस्पताल ३०० शय्याको छ । २२ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि झण्डै रु पाँच अर्ब भन्दा बढी लगानी गरिएको छ । अस्पतालमा यसअघि १५ शय्या आइसियुका थिए । बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै अत्याधुनिक प्रविधिसहित अस्पतालले आइसियु ...
-दक्षिणपूर्वी एसियाका चिसो पहाडी क्षेत्रमा समेत लामखुट्टेले आफ्नो उपस्थिति देखाउन थालेका छन् । लामखुट्टेमा वंशानुगत (जेनेटिक) परिवर्तन नभई ग्राह्य (एडप्टिभ) परिवर्तनले गर्दा यस्तो भएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को दक्षिणपूर्व एसिया क्षेत्रीय कार्यालय, नेग्लेक्टेड ट्रपिकल डिजिज कन्ट्रोलका क्षेत्रीय सल्लाहकार डा.अहमद जमसिद मोहम्मदका अनुसार हाल नेपाल, भुटानका उच्च पहाडी क्षेत्रमा समेत डेंगु फैलाउने इडिस एजेप्टाई लामखुट्टे देखिन थालेका छन् । डब्लूएचओ दक्षिणपूर्व एसिया क्षेत्रीय समितिको ७० औं अधिवेशनमा उनले उक्त जानकारी दिएका हुन् । केही वर्षअघिसम्म समथर भूभागमा मात्र देखिने दिउँसो टोक्ने यो लामखुट्टे ...
हाम्रो जन्म दिन, बार, घडी, पाला आदिको आधारमा ज्योतिषिय भाग्यफल हेर्ने गरिन्छ । हालै भएको एक सोधले चाहि हामी जन्मेको महिनाको आधारमा हाम्रो स्वास्थ्य र स्वभावबारे थाहा हुने तथ्य उजागर गरेको छ । हामी जन्मेको महिनासँग हाम्रो स्वास्थ्य पनि जोडिने शोधकर्ताको भनाई छ । यस हिसाबले हाम्रो स्वास्थ्यसँग हामी जन्मने महिनाले पनि अर्थ राख्छ । जनवरी जनवरी महिनामा जन्मिएकाहरुको व्यक्तित्व आर्कषक हुने, अक्सर खुशी रहिरहने स्वभाव हुन्छ । श्रममा विश्वास गर्नुका साथै आˆनो करियर प्रति विशेष झकाव रहन्छ । उनीहरु सामाजिक हुनुका साथै नेतृत्व गर्ने क्षमताले ...
वास्तुअनुसार किचेन डिजाइन
घरको बाहिरी भाग मात्र सुन्दर भएर हुँदैन, भित्री रूप पनि सुन्दर हुनु आवश्यक छ । धेरैको चाहना घर, कोठा, किचेन सुन्दर होस् भन्ने हुन्छ । भित्री भाग पनि उति नै सुन्दर हुनु आवश्यक हुन्छ । घरलाई सुन्दर देखाउन किचेनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । किचेनमा हिट बढ्ने कलर राख्नु हुँदैन । किचेनमा लाइट ब्लु, लाइट ग्रिन, लाइट ग्रे कलर राम्रो देखिन्छ । किचेन खुला हुनुपर्छ । काम गर्ने ठाउँमा उज्यालो प्रशस्त आउने गरी डिजाइन गर्दा टाउकोले छेकेर असर पर्ने गरी लाइट राख्नु हुँदैन । छर्लंग देखिने गरेर ...
मोटो शरीर भएका युवतीले यसरी छान्नुस् ड्रेस
मोटो शरीर भएकाहरूले पहिरन छान्दा निकै गुनासो गरेको पाइन्छ । आफ्नो शरीर आफैँलाई भद्दा लाग्ने गरेको बताउने उनीहरू पहिरनको विषयमा पनि उत्तिकै गुनासो गर्छन् । भनेजस्तो कपडा नमिल्ने, नसुहाउने आदि समस्या हुन्छ । रोजिना श्रेष्ठ, फेसन डिजाइनर, कायरा बुटिक, सिटी सेन्टर सकेसम्म ए लाइन र वाई सेपमा कट भएको, लाइक्रा, सिफन, जर्जेट कपडा प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि प्लेन, अँध्यारो कलरका कपडा प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यो कपडामा बीच भाग कहीँ कतै मात्रै डिजाइन गरेको लगाउन जरुरी छ । यसो भयो भने मोटा युवतीले आफूलाई स्लिम देखाउन सक्छन् ...
यसकारण फैलन्छ झाडापखाला
वर्षायामसँगै अस्पतालमा झाडापखालाका बिरामी बढ्न थालेका छन् । दूषित पानीको प्रयोग र घरबाहिरको अस्वस्थकर खानपानका कारण झाडापखालाको संक्रमण बढ्न थालेको हो । अहिले गर्मी पनि छ । यस्तो मौसमले पनि झाडापखालाका बिरामी बढाएको हो । त्यसैले सबैभन्दा पहिले स्वस्थकर खानेकुरा र पानी उमालेर खानु आवश्यक छ । यस्तो मौसमले पनि झाडापखालाका बिरामी बढाउन सहयोग गर्छ । पातलो दिसा आउनु, सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरैपल्ट दिसा आउनु, खाना खान मन नलाग्नु, कमजोर महसुस हुनु, ज्वरो आउनु झाडापखालाका लक्षण हुन् । झाडापखाला खाना तथा पानीबाट सर्ने रोग हो । त्यसैले ...
हामी धेरै समय चिन्तामा गुज्रिरहेका हुन्छौँ । हामीलाई सधैँ खुसी रहन विभिन्न खालका चुनौतीले बाधा पु¥याइरहेको हुन्छ । सोही कारण चाहेर पनि खुसी हुन सकिँदैन । यसले गर्दा शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा अस्वस्थ भइरहेका हुन्छौँ । त्यसो भए निरन्तर खुसी रहन के गर्ने त ? अथवा मुड फ्रेस गराउन के गर्ने त ? आफ्नो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यका लागि तनावलाई व्यवस्थापन गर्दै यसरी आफ्नो मुड फ्रेस गराउन सक्नुहुन्छ : सकेसम्म हाँस्ने प्रयास गर्नुहोस् मनलाई खुसी बनाउन हाँसो सबैभन्दा राम्रो औषधि हो । यसले मुडलाई परिवर्तन गरेर ...
डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकामा भाइरलजन्य रोगको संक्रमण बढेपछि गाउँपालिकाले आइतबारदेखि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ । दुर्गममा रहेको वर्षात्का कारण गाडी चल्न नसकेपछि भागेश्वर गाउँपालिकाको वडा नं ५ का विभिन्न गाउँमा भाइरलजन्य रोगका बिरामीको सहज उपचारका लागि भन्दै गाउँमै स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको हो । भागेश्वर गाउँपालिकाको आयोजनामा वडा नं ५ को चौगाउँमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको हो । भागेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष कौशिला भट्टको विशेष पहलमा सञ्चालन गरिएको हो । ग्रामीण क्षेत्रबाट जनताले माग गरेपछि निःशुल्क शिविरको आयोजना गरिएको भागेश्वर गाउँपालिकाका सि. अहेव मदन भाटले बताउनुभयो । शिविरमा ...